Onlinespyboy :: ၀တ္ထု
by nayminnmyat on Wed Dec 07, 2011 7:05 am
ပျင်းလွန်းလို့ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်လိုက်သည် ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နှင့်ကြာ တော့လည်းပျင်းလာသည်။ ၀က်ဆိုက်တွေလဲ ကြည့်ရတာညောင်းလာသည်။ သူချက်ရွန်း ထဲဝင်လိုက်သည် အပျင်းပြေပေါ့။ သူ့နစ်နိမ်းကိုသူကြည့်ပြီးပြုံးသည် အထုတ်ရှုပ် တဲ့သူဘာ သာသူသဘောကျစွာတစ်ချက်ရယ်သည်။ ချက်ရွန်းထဲမှနစ်နိမ်းတော်တော်များများကို သူလိုက် ကြည့်သည်ချက်ချင်စိတ်မရှိ ပျင်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ၀ါးကနဲတစ်ချက်သန်းဝေလိုက်သည် ခုမှ (၇) နာရီထိုးရုံရှိသေးသည် မအိပ်ချင်သေး အချိန်တွေကိုအိပ်စက်ချင်းနှင့်ကုန်လွန်ပစ်လိုက် ရမှာကိုသူနှမျှောသည်။ ဒီအတိုင်းတော့ဘယ်ရမလဲ နည်းနည်းတော့ရှုပ်လိုက်ဦးမည် အပျင်းပြေ ပေါ့။ သူနစ်နိမ်းတွေကိုလျှောက်ကြည့်ရင် နစ်တစ်ခုကိုသွားတွေ့သည် အရူမလေး တဲ့နစ်နိမ်း ကိုကြည့်ပြီးသူနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားသွားသည်။ အပျင်းပြေပေါ့ကောင်မလေးရေ အထုတ်ရှုပ်နဲ့ အရုးမလေး အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲတစ်ခုစတင် ကြရအောင်လား။
ထို့နောက်သူကပင်စတင်နှုတ်ဆက်လိုက် သည်။ တိုက်ပွဲခေါ်သံပေါ့ကောင်မလေးရေ…..
"ဒါပေါ့ရှင်လူတိုင်းက တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီရူးနေကြတာပဲ သြော်ဒါနဲ့ရှင်ပုံကြည့်ရတာအဲ့ဒီ ပြန်လာပြီးပြီထင်တယ်''
"ဟင့်အင်းငါက အဲ့ဒီကိုသွားစရာတောင်မလိုဘူးငါ့အတွက် ကော်ဖီကောင်းကောင်းတစ်ခွက် ရယ် စာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်ရယ်ရှိရင်လုံလောက်ပြီ''
"နိုး သမားဆိုတဲ့အဓိပ္ပါတယ်ကတော်တော် ကျယ်ပြန့်တယ်ကွ ငါ့ကိုယ်ငါစာသမားပေသမား လို့တော့မခ၀ံ့ယူပါဘူး ပြောချင်ရင်တစ်ခုတော့ပြောလို့ရတယ် စာဖတ်သမားလို့''
"ရှင်ကဗဟုသုတ ကြွယ်မှာပေါ့နော် စာတွေများများဖတ်တယ်ဆိုတော့''
ထို့နောက်သူမနဲ့ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းပါးပါးပြောပြီး ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ကာအိပ်ပစ်လိုက် သည်။ထိုညကျမှထူးထူးဆန်းဆန်း ကျွန်တော်စိတ်ရောဂါအထူးကုသို့ရောက်သွားသည်ဟု အိပ်မက်မက်သည်………………….
ဘ၀ကိုအလျားလိုက်ဖြတ်သန်းရသည်မှာပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းလှသည် ပုံစံခွက်တွေချကာ နေရသောဘ၀ကိုမုန်းသည်။ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်ကားကြီးစီးပြီး ဟန်းဖုန်းကိုဟန်ပါပါ ပြောတတ်သော ညဘက်ကာရာအိုကေသွားတတ်သူကိုလူကြီးလူကောင်းဟုပြောကြသည်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်တတ် တဲ့သူကိုတော့လူကြီးစကားနားမထောင်ဘူး လူဆိုးလေးဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ လူကြီးလူကောင်းဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ ?
နံရံကိုကျောမှီထားရင်းမှသောက်လို့ကုန်သွားသောအအေးဘူးကို အမှိုက်တောင်းထဲလှမ်းပစ် ထည့်လိုက်သည်။ အအေးဘူးကအ မှိုက်တောင်းထဲ ဖုတ်ကနဲ ကျသွားသည် လူတွေပြောတဲ့စည်းကမ်းဆိုတာအမှိုက်တောင်းထဲ အမှိုက်လှမ်ပစ်ထည့်ရသလိုပါပဲ………
ကွန်ပျူတာဖန်းသားပြင်ကိုကြည့်ရင်းသူရင်ခုန်နေသည် နာရီကြည့်လိုက်တော့(၇)နာရီထိုး အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဘာကြောင့်ရယ်မသိသူမနှင့်စကားပြောချင်မိသည် ထူးဆန်းလွန်း သည်။ ချက်ရွန်းထဲမှ အရူးမလေး ဆိုသောနစ်ကိုတွေ့လိုက်သည်နှင့် သူဖြတ်ကနဲဝမ်းသာ သွားသည် ဘာကြောင့်များသူမကိုမှတ်မှတ်ရရရှိနေပါလိမ့်…
သူမစကားကြောင့်သူပြုံးမိသည် သူကောင်မလေးကိုစချင်လာသည် ထိုကြောင့်..
"ကောင်မလေး ငါ့အိတ်ကပ်ထဲထည့်ထားတဲ့ကောင်မလေး အဲဒါဘယ်နားထွက်ကျ သွားမှန်းမသိဘူး''
"ခုန်ထွက်ထွက်ကျပျောက်ပျောက် ငါတော့သူ့ကိုတွေ့ချင် တယ်ကူရှာပေးပါကွာ''
"ဟုတ်တယ် ငါလည်းသိတယ်ဒါပေမယ့်ခက်နေတာက သူ့ဓါတ်ပုံငါ့မှာမရှိဘူးပြီးတော့ သူ့ကိုငါကမြင်တောင်မမြင်ဘူးဖူး''
"သြော် ကလေးမမှာ ချစ်သူလေးဘာလေးမျာရှိပြီလားလို့ပါ''
"ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ဒီအတိုင်းသိချင်ရုံလေးသက်သက်ပါ ဒါပေမယ့်မင်းအဆင်မပြောလဲရပါ တယ်မပြောပါနဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူး''
"ဟုတ်တယ်လေ ချစ်သူဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ရည်စားဆိုတဲ့ဝေါဟာရချင်းတူမှမတူတာ လွယ် လွယ်ပြောရရင်ကွာ နှလုံးသားဆိုတာကန်ထရိုက်တိုက်ကြီးတစ်ခုဆိုပါတော့သူ့မှာအခန်းလွတ် တွေအများကြီးပဲ ရည်းစားဆိုတာကအဲ့ဒီအထဲမှာခေတ္တ ခဏလာရောက်နေထိုင်သူပေါ့ကွာ။ ချစ်သူဆိုတာက အဲ့ဒီအခန်းတွေကို သိမ်းကြုံးပိုင်ဆိုင်သွားသူကွ''
"ဟာ မင်းမှားနေပြီငါကအချစ်အကြောင်နကန်းတစ်လုံးတောင်မသိသေးသူတစ်ယောက်ပါ ကွာငါတင်မဟုတ်ပါဘူး အချစ်အကြောင်းကိုဂဃနနသိတဲ့သိတဲ့လူတော်တော်ရှားတယ်ကွ အချစ်ဆိုတာ အဖြေထုတ်ရခက်တဲ့ပုဒ်စာ တစ်ပုဒ်ပါ''
သူမသည်ထိုစကားကိုပြောပြီးအောက်သွားလေတော့သည် သူရင်ခုန်သံကိုဒိန်းကနဲပြန်ကြားရ သည်။ထိုညအိပ်မက်ထဲမှာကမ္ဘာအနှံရောက်ဖြစ်သည်။
ဂစ်တာကြိုးကိုဒေါင်ဒေါင်ဒင်လုပ်နေမိသည် ဂစ်တာတီးဖို့လည်းစိတ်ကမပါ ခေါင်းထဲမှာအတွေး တစ်ခုကစိုးမိုးနေသည်။ သူမကိုနာမည်ရယ်ဘယ်မှာနေတာရယ်ကိုမေးသင့်သလားထိုအရာုကသူ့ခေါင်ထဲ မှာစုိးမိုးနေ သည်။
သူမကိုသူ မသိ ဘယ်မှာနေတာလဲမသိ မသိခြင်းနဲ့ပဲသူရင် ခုန်နေသည်။ တကယ်လို့သိသွားရင်ရောဆက်ရင်ခုန်ဦးမှာလား တစ်ခါတစ်ခါဒီအတိုင်းမသိခြင်းနဲ့ပဲရင်ခုန် နေတာကောင်းသည်။ဘ၀ဆိုသည်မှာ လျှို့ဝှက်သောပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် ထိုပုဒ်စာကိုပင် အဖြေထုတ်ကြရင်းလူတွေသည်ဘ၀ကိုဆက်လက်ရှင်သန်သည်။ မျှော်လင့်ချက်ဆိုသည်မှာ နာတာရှည်ရောဂါနှင့်တူသည် လူသည်နာတာရှည်ရောဂါကြီးကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ထွေးပိုက်ချင် ကြသူများဖြစ်သည်။
အချိန်တို့တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားသည် သူမသည်ခုချိန်ထိဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာသူ မသိပါသိအောင်လည်းသူမကြိုးစားခဲ့ပါ။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာသူမ သည် သူ့ရင်ထဲသို့စူးစူးနစ်နစ်ဝင်ရောက်နေရာယူပြီးဖြစ်သည်။ အရူးမလေး နာမည် နှင့်လိုက်အောင်ပင် သူ့ကိုရူးသွပ်စေခဲ့သည်။ ခုဆိုလျှင်သူမနှင့်သိခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကျော် လာပြီဖြစ်သည် သူမနှင့်ကျွန်တော် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တွေ့ရှိ မြင်ဘူးကြခြင်းမရှိကြ သေးပါ။ လိုလည်းမလိုအပ်ဟုထင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာစွဲစွဲ လန်းလန်း သတိရနေခြင်းကို အချစ်ဟုခေါ်လျှင် သူ့ရင်ထဲမှာ အရူမလေးကိုချစ်မိနေပြီဖြစ်သည်။ ငါ့ရင်ထဲမှာ နင့်ကိုခဂ္ဂါလို့နာမည်ပေးထားတယ်ကောင်မလေးရေ….ထက်မြက်တဲ့ဓါးသွားတစ်လက်ပေါ့
အချစ် သည် ခံစားမှုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ဆိုလျှင် မမြင်ရပဲနှင့်သူ ခဂ္ဂါ ကိုချစ်မိနေသည်မှာ ဘာဆန်း သနည်း။ အောင့်ထားလို့မရနိုင် သောအရာတွေထဲမှာ အချစ်လည်းပါသည် သူအောင့်မထားနိုင်တော့ပါ ထို့ကြောင့်..
ကွန်ပျုတာဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ပြီး သူရင်တွေအရမ်းခုန်နေသည် ငါ့ကိုဘာကြောင့်များ ဒီလောက်ရင်ခုန်စေခဲ့ရတာလဲကောင်မလေးရယ်..
"ဟိုင်းဒီနေ့ မင်းနောက်ကျတယ် ခဂ္ဂါ''
"အင်းဟုတ်တယ် အဖေခိုင်းထားတဲ့ အလုပ်ကလေးမပြတ်သေးတာနဲ့ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာ''
"သြော် အင်း မနေ့ညကငါအိပ်မပျော်ဘူး ခဂ္ဂါ''
"ဘာလို့လည်း ကြမ်းပိုးကိုက်လို့လား ခစ် ခစ် ခစ်..''
"မနေ့က ငါဟိုကောင်နဲ့တွေ့တယ် အဲ့ဒီ့ကောင် ငါ့ကိုမညှာမတာလုပ်ရက်တယ် ဟာ''
"ဘယ်ကောင်ရမှာလဲ cupid လေ မြားနတ်မောင်ပေါ့ သူ့မြားကြီးနဲ့မညှာမတာငါ့ကိုလာပစ် တယ် ခုတော့နင်စဉ်းစားကြည့် ငါ့မှာမြားဆိပ်သင့် နေပြီ နင်ငါ့ကိုကူညီပါဟာ နော်''
"နင်မှားနေပြီ ဆေးခန်းသွားရမှာ ဘာမှမပူပါနဲ့ဟာမကုနိုင်ရင်သေရုံပါပဲ ခစ် ခစ် ခစ်''
"`ဟုတ်ဘူးဟ cupid ကပြောသွားတယ် အဲ့ဒီမြားဆိပ်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာနင်တစ်ယောက်တည်း ဖြေနိုင်တာတဲ့''
"နိုး…..အချစ်မှာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ မပါဘူးလေ ခံစားချက်သက်သက်ပဲ အချစ်ဆိုတာ ရင်ခုန်သံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်''
"ဟုတ်ပြီလေထားပါတော့ ဒါပေမယ့် မိန်ကလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့ ဒါသေချာစဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စလေ နင်ငါ့ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြောတာထက် အပြင်မှာပြောရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်''
"အင်းပေါ့ ငါအောက်တော့မယ် အထုပ်ရှုပ် အိပ်မက်လှလှ မက်ပါစေ''
အိပ်မက်တွေကတော့ လှမှာကြိမ်းသေပါတယ် ကောင်မလေးရယ် အချစ်ဆိုတာ ရင်ခုန်သံခြင်း နှီးနှောကြတာပါ။
စောစောစီးစီးနိုးလာသော သူ့ကိုမြင်တော့မေမေ ကတအံတသြ နဲ့ကြည့်သည် ပြီးတော့
ဒီနေ့တော့ကြားသားမိုးကြိုးပါလားဟေ့ ငါ့သားအစောကြီးနိုးတယ်ဟေ့ ဟုအော်ပြောသည်။
လေလေး တချွန်ချွန်နှင့် ရေကိုစိမ်ချိုးပစ်လိုက်သည် ပြီးတော့အ၀တ်အစားလဲ ကျောပိုးအိတ်ကိုလွယ် ကာကားဂိတ်သို့ထွက်ခဲ့သည်။ကားဂိတ်ရောက်ကားကသိပ်မစောင့်လိုက်ရအဆင်သင့်ပင်တွေ့ရသည် ဘတ်စ်ကားကတော့ ရိုးရာမပျက်လူတွေပြည့်ကျပ်ညပ်နေသည်။ နေရာလေးတစ်နေရာစာရဖို့တိုး ဝှေ့နေကြသောလူတွေကိုကြည့်ကာသူရယ်ချင်သည်။ သြော်ကိုယ့်အတ္တအတွက် တခြားလူကိုတောင် ဂရုမစိုက်နိုင်ကြတော့။ အင်းလေလူဘာဆိုမှ အတ္တတော့ ဘယ်ကင်းနိုင်ပါ့မလဲ။ သူဆင်းရမည့်မှတ်တိုင် ရောက်တော့ နာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်သည် ၉ နာရီ ထိုးဖို့၁၀ မိနစ် ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်သည်။ သူချိန်း သည့်ဆိုင်ရောက်ဖို့က နည်းနည်းတော့လျှောက်ရဦးမည် နောက် ၅ မိနစ်ပေါ့။ သူမနှင့်တွေ့ဖို့ကို ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာချိန်းထားသည် ၉ နာရီထိုးတွေ့ကြမည်။
သူမချိန်းသည့်ဆိုင်ရောက်ဖို့ကားလမ်းတစ်ခုသာခြားတော့သည် ဒီကားလမ်းကူးပြီးတာနဲ့ မင်းနဲ့ငါ တွေ့ရတော့ မှာပါခဂ္ဂါ ရယ။ သူမနှင့်တွေ့လျှင်တော့ မြားဆိပ်သင့်နေတဲ့ငါ့နှလုံးသားကို အဆိပ်ဖြေ ပေးပါခဂ္ဂါရယ် ပေါ့ ဒါမှမဟုတ် မင်းကိုက်သွားတဲ့ငါ့နှလုံးသား အကောင်းအတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေး ပါပေါ့…..ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ့်ပျော်မြူးနေမိသည်။ ငါလာပြီကြွက်မလေးရေ …
၀ုန်းကနဲအသံနှင့် အတူသူလွင့်ပျံထွက်သွားသည် စူးနင့်သောဝေဒနာတစ်ရပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားလိုက်ရသည် သူခေါင်းတစ်ခုလုံးမူးဝေနောက်ကျိလျှက် နားထဲကလေတွေတဟူးဟူးထွက်နေသည် ငါအရောက်လာခဲ့တယ်နော်ခဂ္ဂါ ဒါပေမယ့် နင့်ဆီတော့ ငါရောက်မလာနိုင်တော့ဘူး ခဂ္ဂါရယ်..ငါလေ နင့်ကို………အ ………ရမ်း……….ချစ်……..တယ်……
ထို့နောက် သူအသိတွေ မှောင်အတိကျသွားသည်………….
"ကောင်လေးကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ် သနားပါတယ် ဟယ် "
လူတွေရုတ်ရုတရုတ်ရုတ် နှင့်တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြော နေကြသော
စကားတွေကြောင့် လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လူတစ်ယောက်ကိုကားတိုက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သူမရင်ထဲနမိတ်မကောင်းသလိုိခံစားလိုက်ရသည်။ သူရောက်နေပြီလားမသိ ဆိုင်ထဲဝင်စောင့်နေတာကောင်းပါတယ် လေ။ သူမစဉ်းစားပြီးဆိုင်ထဲဝင်လာ ခဲ့သည်ကော်ဖီနှစ်ခွက်မှာလိုက်သည် တစ်ခွက်ကသူမအတွက်တစ်ခွက် ကအထုပ်ရှုပ်အတွက် တကယ် လို့သူကချစ်လားလို့မေးလာခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ ထိုအကြောင်းအရာကိုတွေးမိတော့သူမရင်ထဲ ရှက်ရွံသွားသည်ပါးပြင်ကပန်းနုရောင်သန်းသွားသည် နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ် သူဘာလို့နောက်ကျနေတာပါလိမ့် ဟင်းလာတော့မှတွေ့မယ်
အထုတ်ရှုပ် နင်ဟာလေ ဘာ ကိုမှအလေးအနက်မထားဘူးဆိုတာတကယ်ဖြစ်မယ်။''
အချိန်တို့တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားသည် ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် ကော်ဖီနှစ်ခွက် ကော်ဖီနှစ်ခွက်လုံးကအရာမယွင်းသေး ကော်ဖီဆိုင်ကထွက်လာသော တေးသွားက လွမ်းမောဖွယ် ကောင်မလေးကအပြင်ကိုတွေတွေ ငေးငေးလေးကြည့်နေသည် အတန်ကြာတော့ မှသက်ပြင်းကို ဟူးကနဲမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။
"နင်ဟာလွယ်လွယ်နဲ့မေ့တတ်သူတစ်ယောက်ဆို တာတကယ်ကိုး " ဟုတိုးတိုးလေးရေရွတ်သည်။ ကော်ဖီနှစ်ခွက် အတွက်ပိုက်ဆံကိုရှင်းခဲ့ကာ ထွက်သွားသည် သေချာကြည့်မည်ဆိုလျှင် မျက်ရည်ကြည်များလဲံ့နေသောကောင်မလေး၏မျက်ဝန်းကို တွေ့နိုင်သည်။ ကောင်မလေး၏ရင်ထဲမှာဘာရှိခဲ့သနည်း……………
တစ်နေရာမှာတော့ တရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားသော ကောင်မလေး၏ကျောပြင်ကိုကြည့်ပြီး ငိုနေသော ၀ိညာဉ်တစ်ခု ရှိနေခဲ့သည်ဆိုတာသာ ကောင်မလေးသိသွားခဲ့လျှင်………..